June 8, 2021 N88LeaveaComment on अनलाइनबाट बैंकिङ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस्
काठमाडौं । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै सरकारले देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाे छ । यस्तो अवस्थामा घरमै बस्नुभन्दा अर्को सुरक्षित विकल्प छैन । निषेधाज्ञाकै कारण अधिकांश मानिसहरू अनलाइनबाटै बैंकिङ काराेबार र भुक्तानी कार्य गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि प्रयोगकर्तालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् […]
काठमाडौ। हरेक दिन एक स्याउ खानाले बिरामी हुनबाट बच्न सकिन्छ । स्याउ विभिन्न पोषकको तत्वले भरिपूर्ण भएकोले शरीर तन्दुरुस्त राख्नको साथै पाचन क्रियाको स्वास्थ्य राख्न मदत गर्छन् । स्याउको सेवनले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउछ । स्याउ, सदवहार फल हो । यो सजिलै उपलब्ध हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा त्यती महंगो पनि छैन । स्याउको सेवनले पाचन […]
June 8, 2021 N88LeaveaComment on साउनदेखि बढ्ने कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ताले पनि थेग्न नसक्ने गरी बढ्याे बजार भाउ
काठमाडाैं । बजेटमा कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ता बढाउने व्यवस्था भएसँगै बजार भाउ आकासिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि तलब र बृद्ध भत्ता बढाउने व्यवस्था गरेसँगै बजार भाउ पनि उकालो लाग्न थालेको हो। अहिले सबैभन्दा बढी मूल्य खाने तेलमा बढेको छ। त्यसपछि मासुको भाउ बढेको छ। खाने तेल […]
June 8, 2021 N88LeaveaComment on सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने ? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने !
सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले रक्तसञ्चारलाई अझ नियन्त्रित गर्छ, जुन दीर्घकालिन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । रातो दाग बस्छ ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नाले ब्राको इलास्टिक लाग्ने ठाउँको छाला रातो हुन्छ । गर्भवती अवस्था अथवा स्तनपान गराउने महिलाले भने खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । राम्रो […]
पूर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी उशाना लैला ‘बबा’ शाहको चर्चा नेपालमा चुलिदैँ गएको छ । राजा महेन्द्र विर विक्रम शाहका कान्छा छोरा धिरेन्द्रले तीनवटा विवाह गरे । उनको तीन श्रीमतीबाट ५ छोरीहरु छन् । जेठि श्रीमति प्रेक्षा शाहबाट उनको तीन छोरीहरु छन् । प्रेक्षा पुर्वरानी ऐश्वर्या र कोमलको बहिनि हुन् । उनको तर्फबाट पुजा […]
June 8, 2021 N88LeaveaComment on एनसेलले परिमार्जन गर्यो अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क, अब कुन देशमा फाेन गर्दा कति लाग्छ
काठमाडाैं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जेठ २१ देखि लागु हुने गरि विश्वका १९ देशहरुको अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क परिमार्जन गरेको छ । एनसेलले नयाँ शुल्कहरु नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको स्वीकृत बमोजिमनै कल दर निर्धारण गरिएको हो । गत जेठ ९ गते नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई इटाली,माल्टा, जर्मनी,ताजिकस्थान, जोर्डन, थाइल्याण्ड, लाटभिया, स्लोभेनिया, माल्दिभ्स, बेल्जियम, इस्टोनिया, क्रोएशिया, […]
June 8, 2021 N88LeaveaComment on मुख्यमन्त्री राईको निवास अगाडि सरकारी गाडी भित्रै चालक मृत फेला
विराटनगर । प्रदेश १ मुख्यमन्त्री निवास अगाडि सरकारी गाडीका चालक मृत भेटिएका छन् । सिंचाई डिभिजन कार्यालय सुनसरीको गाडीका चालक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । प्रदेश १–०४–०००१, झ–०००६ गाडीका चालक उदयपुर बेलका–३ का राज ढकाल मंगलबार दिउँसो मृत भेटिएका हुन् । उनी हाल विराटनगर–३ पुष्पलाल चौकमा कोठा लिएर बस्दै आएको खुलेको छ । गाडी […]
‘बादल’ले किन लिए एक्कासी यस्ताे निर्णय, बालुवाटारदेखि खुमलटासम्मै खैलाबैला
June 8, 2021 N88LeaveaComment on ‘बादल’ले किन लिए एक्कासी यस्ताे निर्णय, बालुवाटारदेखि खुमलटासम्मै खैलाबैला
काठमाडौं । राम बहादुर थापा ‘बादल’ अब आफु राजनीतिबाट सन्यास लिने मुडमा पुगेको बताएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न शनिवार बोलाइएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा बादलले यस्तो बताएका हुन् । एक नेताका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘मलाई दिक्क लाग्न थालिसक्यो, राजनीतिबाट टाढा रहौं जस्तो, सन्यास लिउँ जस्तो लाग्न थालेको छ कमरेडहरु ।’ […]
एमालेमा गएका माओवादी सबै नेता आफ्नै घर फिर्ता
June 8, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा गएका माओवादी सबै नेता आफ्नै घर फिर्ता
काठमाडौं । अप्ठ्यारोमा साथ दिंदै आएको भन्दै अहिले नै जसपाका नेताहरुलाई मन्त्री नबनाउन पूर्व माओवादीका नेताहरुले गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अघि केपी ओलीसँगको छलफलमा रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरुले तत्काल माओवादीबाट मन्त्री बनेका नेताको सन्दर्भमा अन्तरिक आदेश मात्रै आएको, एमालेमा माधव नेपालसँग पनि छलफल चलिरहेको भन्दै जसपालाई तत्काल सरकारमा […]
गृहमन्त्रीमा कसले मार्ला दाउ
June 8, 2021 N88LeaveaComment on गृहमन्त्रीमा कसले मार्ला दाउ
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार बुधबार वा बिहीबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा एमालेकै अर्का समूह (माधवकुमार नेपाल) लाई समेट्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्रालय आफंैसँग […]